CPA vs MBA: Iza no tsara kokoa ho an 'ny Asa & Salary?
23 Aug CPA vs MBA: Iza no tsara kokoa ho an 'ny Asa & Salary?
College mpianatra sahiran-tsaina ny tenany matetika mahita rehefa manapa-kevitra eo mandeha ny CPA fahazoan-dàlana na nahazo ny diplaoma MBA. Ny fanalahidin 'ny fitadiavana ny marina dia amin'ny alalan'ny safidy ny fanombanana ny asa sy ny tanjona tiany manokana. Raha tokony niandrandra ny hafa ho torohevitra, dia tsaratsara kokoa ianao maka ny fotoana sy mieritreritra momba ny ho avy drafitra. Mba hanampy anao handray fanapahan-kevitra, andao hijery ny fototry ny tsirairay mba afaka miala voly sy mieritreritra afa-tsy momba ny ho avy mety.
Inona no atao hoe MBA?
CPA vs MBA: karama
CPA vs MBA: Certification Mora
A Certified Public kaonty (CPA) dia ny fankatoavana ara-bola omena ny American Institute ny Certified Public bola (AICPA). Fanamarinana io dia fantatra ho toy ny mariky ny zava-bita lehibe eo amin'ny ara-bola orinasa. Raha te- ho CPA, tsy maintsy mandalo fanadinana izay nitarika ny AICPA. Ny CPA manomana fanadinana tsara ny anao ny foto-kevitra fototry ny kaonty sy mizaha toetra ny fahalalana sy ny fahaizana mampihatra izany fianarana any an-tsaha ny fanaraha sy ny fitantanam-bola. A CPA dia heverina ho manam-pahaizana momba ny lalàna ao amin'ny hetra fanontaniana na manome torohevitra ny olona hetra. Ianao dia hanana safidy misokatra ny asa tao amin'ny orinasa lehibe na kely, na dia ho anao.
Ny Tompon'ny ny fitantanan-draharaha dia matetika ny mari-pahaizana roa taona Mazava ho azy fa natolotry ny fandraharahana kolejy mba hanomanana anao ho amin'ny sehatry ny raharaham-barotra. Ny MBA ankapobeny dia fianarana any amin'izao fitantanana sy ny andraikitra mifanaraka tsara indrindra ho anao raha tianao ny asa sokitra ny akany eo amin'ny sehatry ny fitantanana, indrindra fa barotra. Mpianatra misokatra ny mikatsaka ny ambaratonga Mazava ho azy fa amin'ny alalan'ny tapa-potoana sy ny lavitra dingan'ny fianarana ireo arakaraka ny faritra ny mifantoka manokana sy ny heviny ao amin'ny orinasa. The different areas of specialization that you can achieve under the umbrella of an MBA program are accounting, bola, -barotra, loharano mpiasa, sy ny asa (raha oharina amin'ny fitantanana fanadihadiana sy ny tetika). Ny fianarana fandaharana ny MBA Tsy voafetra ny fitantanam-bola, ary tafiditra amin'ny foto-kevitra toy ny toekarena, -barotra, fandaminana ny fitondran-tena sy ny hamaroan'isa fanadihadiana.
Amin'ny maha-CPA, ny asa mety ahitana anaram-boninahitra: DPF, auditor, hetra mpanolotsaina na Nanoritra kaonty. Koa satria amin'ny sehatry ny fianarana ho MBA malalaka kokoa-miainga, misy safidy asa bebe kokoa. Raha manana fahazoan-dalana CPA, ny safidy dia hifantoka amin'ny fitantanam-bola sy ny fitantanam-bola. Raha mahazo izy roa lahy, ianao manana izao tontolo izao-baiboly anananao.
Raha manana MBA, manana safidy amin'ny asa lehibe kokoa fahafahana, depending on your area of specialization. Raha manana MBA, afaka miasa amin'ny maha-mpanolo-tsaina fitantanana, barotra mpitantana, fampiasam-bola mpiasan'ny banky, lehiben'ny mpiandraikitra vaovao, asa mpitantana na ny mpanolotsaina ara-bola.
Tena tsy misy zava-miafina lehibe manana MBA na CPA asa bebe kokoa dia afaka manokatra varavarana sy mampitombo ny karama mety. Taona traikefa sy izay miasa dia manana fiantraikany. Raha toa ianao ka CPA dia mahazo vola eo ho eo 10% mihoatra noho ny tsy mitovy CPA. Ny Median karama ho an'ny CPA dia $62,123 isan-taona. Etsy ankilany, Mitana toerana lehibe eo amin'ny andraikitra onitra ho MBA - izay midika fa ny sekoly no nanatrika (-pirenena mifototra amin'ny fandaharana) Afaka hisy fiantraikany tena ianao. Na izany aza, ho an'ny taona voalohany taorian'ny fitadiavam-bola ny MBA, dia afaka manantena ny hahazo asa eo amin'ny tolotra eo ho eo $50,427. Na dia mety ho toa underwhelming, ao an-tsaina foana fa ho hitanao ny vola miditra mety mitombo be rehefa mahazo traikefa ny asa. On ny salam-, raha manana MBA, dia afaka manantena maromaro izay ahitana bebe kokoa mampitraka sy ny fampandrosoana noho ny ankizy tsy izany fanomezan-dalana.
Sarotra ny hanisy vidiny tenifototra amin'ny lasa CPA. Ny saram-pianarana ao amin'ny sekoly izay mahazo ny maripahaizana dia ho tafiditra ao anatin'ny mira. Ankoatra izany, dia hanana ny vola lany izay mifandray amin'ny taranja Prep izay mety atao mba hiomanana amin 'ny CPA fanadinana. Afaka mahatakatra izany hitentina about $2,000. Momba ny fanadinana mihitsy, ny fandaniana miovaova be lavitra avy amin'ny fanjakana ny fanjakana. Misy firenena manana saran'ny fisoratana anarana izay rava tamin'ny firy fizarana(S) ny fanadinana kasainao mipetraka ho. Misy sarany fanampiny ho an'ny retakes. (Dia mila mijery amin'ny biraom-panjakana ny accountancy.) Eo ho eo, dia hitentina ny $1,500 ny hipetraka ho an'ny rehetra ny fizarana efatra. Farany, misy ny vola lany mihitsy ny fahazoan-dàlana, izay eo ho eo ny momba ny $150. Aza adino fa mba hihazona ny fahazoan-dàlana, dia ho takiana mba hanatrika CPE taranja tsy tapaka izay no hahazo vola lany fanampiny. Hoy ny sasany, toy ny Connecticut, mitaky 40 CPE ora isan-taona. Ratsy, ka hamoy araka izay $4,000 amin'ny fanohizana ny fampianarana isan-taona. Vola lany amin'ny fitadiavam-bola ny MBA dia tena miova, ary miankina amin'ny lafin-javatra toy ny: toerana ara-jeografia, andrim-panjakana miankina oharina-bahoaka, isan'ny ora ilaina, sns. Figure amin'ny vola lany hafa toy ny boky sy / na ny fidirana amin'ny aterineto fitaovana, teknolojia vola lany, mianatra taranja ary raha mikasa ny velona-toeram-pianarana, ny vidin'ny trano sy ny birao. Ny eo ho eo ny vidin'ny saram-pianarana dia manodidina $58,000. Fiheverana ny hafa sy ny asa fidiram-bola traikefa fa ho forego raha misafidy ny ho lasa mpianatra manontolo andro. Izany no mahatonga ny tapa-potoana, amin'ny aterineto sy, MBA fandaharan'asa haingana no lasa malaza.
CPA lasa maka dia be intsony anjara bebe kokoa. Tsy maintsy ho vita 150 undergraduate bola ora sy sasany milaza fitakiana fa tsy maintsy nomena koa mba manana ora maro niasa teo ambany fanaraha-maso mivantana ny CPA. Ho koa 18 volana mba hipetraka ho an'ny dia mandroso efatra ao amin'ilay CPA fanadinana. Raha atambatra dia afaka maka ny 8 1/2 taona ho lasa CPA (e.g. undergraduate dimy taona ny asa, roa taona teo amin'ny asa sy ny 18 volana mba mizara ny CPA fanadinana.) Tsy misy timeframe manokana ho vita ny fandaharana MBA diplaoma. Mandra-pahoviana no mila miankina raha mianatra feno na tapa-potoana, ary raha manatrika kilasy ao amin'ny toeram-pianarana, na maka izany an-tserasera. Misy ihany koa ny sekoly ho an'ny asa manome voninahitra traikefa izay afaka mandondòna eny ny sasany amin'ireo ora takiana amin'ny ambaratonga vita. Koa satria ny MBA fandaharana dia mari-pahaizana maîtrise fandaharana, tsy misy karazana taratasy fanamarinana fanadinana fa ho ilaina tanteraka eo vita. Ianao fotsiny diplaoma avy amin'ny fandaharana. Eo ho eo, maharitra 2-3 taona maro vao vita ny fandaharana MBA.
Raha toa ianao ka liana amin'ny fitantanana raharaham-barotra ny fahafahana na ankapobeny Consulting, dia ny MBA no ho safidy tsara kokoa. Etsy ankilany, raha tanteraka ny "maro cruncher,"Dia tokony ho CPA, indrindra fa raha te-hiasa ho lehibe fitantanam-bola efatra mafy. Raha toa ianao ka CPA izay te hahazo fahatakarana tsara kokoa ny asa sy ny raharaham-barotra ho lasa bebe kokoa employable amin'ny indostria, fahazoana ny MBA ho ilaina. Toy izany koa, raha mahazo ny MBA amin'ny fitanana amin'ny fitantanam-bola, ary mikasa ny orinasa misahana ny fitantanam-bola na ny hetra, mahatonga Tonga lafatra mba handeha ho any ho CPA. Tsy misy vahaolana ny MBA oharina amin'ny CPA quandary. Misy vatana iray feno nataonay ny fikarohana izay mamaritra ny mpomba sy mpanohitra ny fananana iray na ny hafa, na izy roa miaraka. Network sy ny lahateny ho an'ny olona izay manana MBA, CPA na izy roa ka jereo izay torohevitra ateriny. Tsy maintsy manapa-kevitra inona no tsara indrindra ho anao sy handray an-fiheverana ny zavatra mahaliana, fahaiza-manao, -bola sy ny asa tanjona.
CPA, Roger CPA Review, Exclusive Discount, Deep Discount 36 mampiasa ankehitriny
CPA, Surgent CPA Review, Exclusive Discount 35 mampiasa ankehitriny
CPA, Surgent CPA Review, Exclusive Discount 33 mampiasa ankehitriny
Last Used 17 minitra lasa izay
CPA, Wiley CPAexcel, Tolotra manokana 40 mampiasa ankehitriny
Last Used 20 minitra lasa izay
CPA, Roger CPA Review, Exclusive Discount 41 mampiasa ankehitriny
Last Used 8 segondra lasa izay
CPA, Surgent CPA Review, Deep Discount 39 mampiasa ankehitriny
Last Used 7 segondra lasa izay
CPA, Exclusive Discount, Fast Forward Academy 38 mampiasa ankehitriny
CPA, Tolotra manokana, Dia manifakifa ny CPA 38 mampiasa ankehitriny
Daty farany: Oktobra 25, 2018
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 35 mampiasa ankehitriny
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 37 mampiasa ankehitriny
CPA, Gryfina, Exclusive Discount 40 mampiasa ankehitriny
Daty farany: Oktobra 27, 2018
CPA, CPA Gleim Review, Exclusive Discount 38 mampiasa ankehitriny
CPA, Surgent CPA Review, Webinar 38 mampiasa ankehitriny
CPA, Roger CPA Review, Famatsiam-bola ny tolotra 39 mampiasa ankehitriny
CPA, Surgent CPA Review, Famatsiam-bola ny tolotra 33 mampiasa ankehitriny
Last Used 27 segondra lasa izay
CPA, Surgent CPA Review, Andrana maimaim-poana 40 mampiasa ankehitriny
CPA, Wiley CPAexcel, Hafa 34 mampiasa ankehitriny